Álvaro Arbeloa oo faalo ka bixiyay dib ugu laabashada Zidane ee kooxda Real Madrid – Gool FM
Dajiye March 19, 2019
(Spain) 19 Maarso 2018. Daaficii hore ee kooxda Real Madrid Álvaro Arbeloa ayaa xaqiijiyay inay adagtahay sidii loo horumarin lahaa kooxda haatan ee Los Blancos, inkastoo uu dib ugu soo laabtay macalinka reer France ee Zinedine Zidane.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu Álvaro Arbeloa kaga hadlay fikrada uu ka qabo dib u soo laabashada Zinedine Zidane, wuxuuna yiri:
“Waxaan u arkaa in kooxdan ay adag tahay sida lagu horumarin lahaa, ma jiraan ciyaaryahano badan ee awooda inay horumariyaan ama dhigi kara booskii hore ee kooxdan, mana jecli ereyga ah kacdoon”.
“Tani waa kooxdii ku soo guuleysatay 4 jeer tartanka Champions League, mararka qaar xalada uma soconeyso sida aad dooneyso, waxaana qabaa in dhibaatadu ay la xiriirto da’ada”.
Intaas kadib Álvaro Arbeloa ayaa ka hadlay soo laabashada Zinedine Zidane, wuxuuna yiri:
“Waa halyeey Real Madrid ah, ciyaaryahan ahaan iyo macalinba, mana jirto xamaasad ka badan soo laabashadiisa”.
“Wuxuu si wanaagsan u garanayaa qolka labiska ee kooxda Real Madrid, wuxuuna ku tiirsanaan doonaa qof walba ee jooga kooxda, wuxuu heystaa koox fiican ee la shaqeyn karta, waxayna ku ciyaari doonaan 10-ka kulan ee soo socota qaab ciyaareedka ugu sareeya ee suurtagalka ah”.